Travel Tour | अमेत्य
Archive for the ‘Travel Tour’ Category
बेंगलोर ब्यस्त, मैसुर मस्त
Posted: December 21, 2007 in Travel Tour
लगातार २ दिनको यात्रापछि बल्ल पाइला टेक्न पुगिएको बेंगलोरलाई एक नजरमै हाई र बाई गर्दै हानियौं हामी मैसुरतर्फ । मैसुरसम्म पुगिदाको ट्रेनबाट देखिने हरिया र शान्त तथा शितल
दृश्यावलोकन एकदमै मनमोहक थिए ।
मैसुरमै सुनेको हो मैले airtel को original music, T.V. भन्दा अझ उत्कृष्ठ र अझ हृदयस्पर्शी । मात्र बाँसुरी र हावाले दौतरी लाउँदा निस्केको त्यो धुन च्वास्स मुटु छेडेर आँखा बन्द गराउने खालको थियो । चामुण्डेश्वरी मन्दिर दर्शन गर्न उकालो चढ्दै जाँदा देखिएको तल मैसुरको (विहानीपखको) दृश्य मानसपटलबाट हटाउन अझै हम्मेहम्मे पर्छ मलाई-यती आकर्षक र बातावरण अनुकुल कि मानौं भर्खरै पानी परेर हरेक चिज पखालिदा नयाँ र नौलो भएका छन् ।
इन्डियाको मन्दिर जे होस् मान्नै पर्छ, पथ्थरै पथ्थरबाट एक जिवन्त शैलीमा ढालिएका । कुनै कुनै मन्दिरमा त भित्रभित्रै हराइने भन्या, त्यती बिशाल र सुरुङ्गी तालको । त्यो मन्दिरको नाम त ठ्याक्कै बिर्सें तर त्यहाँ पूजा गरिदाँको गीतको संगीत अझ तरोताजै छ ।
दिल्ली, चंडिगढ भ्रमणपछी हाम्रो गन्तब्य रह्यो ताजमहल नगरी-आगरा । ताजको सुन्दरता शब्दद्वारा त पर्याप्त हुन्न तर गर्नै परे पछी एक शब्दै पर्याप्त छ-वाह ताज । अहिले कुरा छाडौं ताजको र कुरो प पकडौं आगरा देखी बेंगलुरु सम्मको ट्रेन यात्राको ।
दुई दिने यात्रा, अनी यस्तै माहोलको लागि छेउमा छ गितार र साथैमा छन् संगीतका पारखी साथी-नविन(अहिले एल्बमको तयारीमा ब्यस्त छन्)। अब यस्तो बेलामा पनि रेलको डिब्बा थर्काइएन भने त लाजै हुने भो भने भनी शुरु भयो गितारको करङ रेट्ने काम-गायकहरुको त के कमी थियो र ? “रातो र चन्द्र सुर्य, जङी निशान हाम्रो” गीत ज्यादा गाइएको थियो त्यसबेला,किन ? प्रश्न नसोध्नुस् । गितार र गीत सँगसँगै अन्ताक्षरी, तास, गफ आदि त छदैथिए समय कटाउन ।
बेला बेलामा किन्नर (हिजँडा) आएर पैसा माग्दा म हल्का डराएको पनि थिए, किन ?
पहिलोपटक जो देखेको थिए मैले(नहाँस्नु होला) । अहिले सोचिइन्छ, यदी अहिलेको ‘म’ त्यतिबेला एक अंशै मात्र हुँदो हो त तिनिहरुबारे एक अर्को लेखै तयार हुन्थो होला, उनिहरुसँगको बातचितको अंश समेट्दै । किन्नरहरु बच्चा जन्माउन सक्दैनन र पनि उनिहरुको प्रतिशत यसरी बढदैछ मानौं उनिहरुसँग मशिनै छ, उत्पादनको लागि ।
अब कुरा मोडौं राततर्फ । सुत्ने बेलामा लागेको तलतल मेटाउन चुरोट के फुकेका थिए हाम्रा एक दाजुले(नाम नभनौं), रेल्वे प्रहरीले चाल पाइ त गए । रेलै देखेको थिएन, रेल्वे नियमै थाहा थिएन, ढाँट्न सम्म ढाँट्यौं(रेल नदेख्नु सत्य पनि हो) र फाइन रु १०० बचाएरै छाड्यौं । रेलै चढ्न पनि इन्डियासम्म धाउनु पर्ने बाध्यता नेपालको भौगोलिक संरचनाले नै बनाएको हो त ? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
दिउँसो त गफमा मस्त हुइन्छ,चालै पाइएन । राती त दर्‍हो तरिकाले चाल पाइयो । मान्छेका तसरिफ त बबाल ठुला र चौडा हुँदा रहेछन्, बाबै, ओगट्दा ओगट्दा सुत्ने ठाउँ नै नदिने । धन्न आफु त दोश्रो (बिचको) सिटमा थिइयो र बचियो, तल सुतिरहेको मेरो साथी ज्ञानेन्द्र-बिचरा, कति कति बेला त परोठा परोठा वाला गन्धले दर्शन टक्रयाउन भ्याए पनि होलान् ।
रातको २ बजेतिर हुँदो हो-एक्कासी आवाज आयो-भुत भुत । साथी मिसन सपनामा तर्सिएको रहेछ, एकछिन त हामी पनि तर्सियौं ।